Infosmada | Fanelezana vaovao tsy marina : homena 5 tapitrisa Ar ireo mahita ilay vehivavy milaza ho mpanao gazety
Publié le 31 Mars | 04:03
Nanao tatitra momba ny famoahana vaovao tsy marina sy fanelezana tsaho ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera, Andriantongarivo Lalatiana, teny amin’ny Foibe fandrindrana ny hetsika iadiana amin’ny Covid-19 (CCO), Ivato. Nambarany fa karohina sy ifampitadiavana, amin’izao fotoana izao ilay vehivavy niteny amin’ny horonam-peo niparitaka amin’ny « facebook » tato anatin’ny andro vitsy. Nanely vaovao tsy marina ary nampisahotaka ny maro io vehivavy io.
Iangaviana ireo mahafantatra ny feony
Nilaza ho mpanao gazety izy tamin’ny fanambarana nataony ary nilaza fa efa mihanaka be eto Antananarivo sy Toamasina ny valan’aretina Covid-19. Karohin’ny mpitandro filaminana izy io, amin’izao fotoana izao ary hahazo valisoa dimy tapitrisa ariary ny mahafantatra ny feony ka manoro azy any amin’ny mpitandro filaminana. Ilazana ihany koa ireo manam-baovao an’ity olona voaray feo ity mba hanatona avy hatrany ny polisin’ny sampana heloka bevava na ny polisin ‘ny « cybercriminalité ». Eo koa ny laharan-telefaonina « Police cybercriminalité » +261 34 05 703 76 na ny polisy misahana ny ady heloka bevava +261 34 05 517 26.
Efa maromaro ny sarona sy nampidirina am-ponja
Ankoatra izany, fito ireo olona nanaparitaka vaovao tsy marina saron’ny polisy ka nampidirina am-ponja vonjimaika (MD) ny telo ary nahazo fahafahana vonjimaika (LP) kosa ny sisa, araka ny tatitra nataon’ny minisitra ihany. Efa hiakatra fitsarana tsy ho ela izy ireo. Ho an’ny eo anivon’ny zandary kosa, sivy ireo nandraisana fepetra ka mbola anatin’ny fanadihadiana ny valo. Ny iray tratra kosa nahazo LP.
Fanafainganana ny ady amin’ny Coronavirus : natsangana ny « Brigade d’intervention rapide »